Sifuna omunye umdlalo ophezulu – u-Du Plessis
Ukapteni wama-Standard Bank Proteas, u-Faf du Plessis, ucele ‘omunye umdlalo ophezulu’ kumdlalo wesibili we-Sunfoil Test bedlala ne-Bangladesh ezoqala e-Mangaung Oval ngoLwesihlanu. u-Du Plessis uchaze ukunqoba ngama-runs angu-333 kumdlalo wokuqala we-Test ubungenawo ‘amaphutha’, futhi usecele okufanayo kubadlali bakhe ukungaguquguquki okufanayo ukuyivala kahle i-series.
“Sifuna omunye umdlalo ophezulu,” u-Du Plessis ekhuluma ngaphambi komdlalo e-Bloemfontein ngoLwesine. “Uma sikhuluma iqiniso, kwisimo esifana nalesi, kubalulekile ukuthi senzelokho kwi-Bangladesh. Yebo, ngosuku lwabo bayingozi kodwa kuzomele sibafake incindezi futhi sizame ukubancisha amathuba emdlalweni lapha abangasihlula ngakhona.”
“Kulomdlalo kubalulekile kimina ukuthi singaguquki,” esho echaza. “Sadlala kahle izinsuku ezinhlanu e-Potch, akukho lapha uhafu we-session waba owe-Bangladesh, sadlala umdlalo ohamba phambili. Kubalulekile ukuthi siwulandelise ngomunye umdlalo lapha, ukuqhuba ngendlela efanayo yilokho esikufunayo.”
Ukulimala kuka-Morne Morkel kulethe izinkinga kulaba abakhethayo, abacabanga ukufaka umuntu pfana no-Morkel noma ukufaka umuntu okwenza konke. U-Du Plessis ulindele ukuthi isimo sizoshesha kunase-Potchefstroom, okugqugquzela abaphosa ngokushesha.
“Kuzobanzima, okukhulu ukulahlekelwa u-Morne,” ekhuluma ngokukhetha. “Ngasekukhetheni ufuna ukuba nesiqiniseko sokuthi ukuhlasela kusafana kubadlali abaphosayo. U-Morne, u-KG, u-Dale no-Vernon kuyaziwa ukuthi sizotholani, uma bengekho, awunaso isiqiniseko. Kubalulekile kithina ukubheka ukulingana eqenjini kodwa sibenabaphosayo abaqinile.”
i-Test series yokugcina ku-2017, futhi ukulimala okukhona kubadlali abahamba phambili ngokuphosa, ithuba elihle lokubheka abaphosa ngokushesha kwisizwe.
“Njengoba kushoda abadlali abakhulu, ikakhulukazi uma kudlalwa namaqembu afana ne-Bangladesh, kubalulekile ukubona ukuthi kukhona ini,” kusho u-Du Plessis. “Sinebhadi lokuthi abadlali bethu abane abaphosayo balimale ngesikhathi esifanayo, asibhekani nesimo esifana nalesi. Okokuqala ngibona umuntu ofana no-Patto (Paterson) nebhola elibomvu futhi ngikwazi nokubona ukuthi yini yini angayenza kanye namakhona kwisizwe sethu.”
u-Paterson ubizelwe iqembu lama-Proteas le-ODI u-Paterson ungenela u-Morkel olimele u-Rabada uhola ama-Proteas ekunqobeni ngama-runs angu-333 Kudingeka sibambisane ukuze sinqobe - u-Bavuma Ama-Proteas adlule ekubuyiselweni emuva kabili ukuphushela ukunqoba -Bangladesh yenza ama-Proteas akusebenzele ukuba ngaphambili kwi-innings yokuqala u-Amla no-Elgar baqinisa isibambo sama-Proteas kwi-Test yokuqala Nganelisekile ngo-97 - u-Markram u-Markram uqale kahle njengoba ama-Proteas efaka ama-runs Ama-Proteas afuna ukunqoba ama-Test – Rabada uMarkram uzodlala umdlalo wakhe wokuqala kwi-Test series ne-Bangladesh